यातायात कार्यालय को अराजकता : बाध्यता कि बेवास्ता? - Laltin.com
यातायात कार्यालय को अराजकता : बाध्यता कि बेवास्ता?
Image source: corporatenepal.com
कोरोना माहामारीको कारण लामो समय देखि बन्द रहेको सवारीचालक अनुमति पत्रको प्रकृया खुल्ना साथ निबेदकहरुको भिड बढेको छ। अनुमतिपत्र पाउने जोस बोकेर यातायात कार्यालय पुगेका हरेक निबेदकको हौसला गेटबाट नै धेरै घटिसक्छ। त्यहाँ भएको भिड र दलालहरुको हुलमा कोही पनि हाँसीखुसी प्रकृया पुरा गरेर निस्किन मुस्किल पर्छ। कर्मचारीहरुको सेवाग्राहीप्रतिको ब्यवहार पनि राम्रो हुँदैन। यस्तो परिप्रेक्ष्यमा आम नेपाली देशको अवस्था देखेर हतोत्साहित हुनु अस्वभाविक होइन।
“ लामो समय कुरेपछि बल्ल जानकारी आयो। तर जुन दिन ट्रायल थियो त्यही दिन निस्लोठ जोरो आएर ट्रायल दिन जान सकिँन। पछि सोध्दा यो सबै प्रकृयाको लागि फेरी निबेदन दिनु पर्ने भनेर थाहा पाएँ। अब फेरि यति लामो समय कुरेर कहिले ट्रायलको मिति आउँछ भनेर बस्नु पर्ने भयो”। लाल्टिन डट कम संगको कुराकानीमा गृष्मा पौडेलले बताइन्।
अन्नपुर्ण पोस्टले असोज ५ गते प्रकाशन गरेको रिपोर्ट अनुसार बेथिति त यातायात कार्यालयको धन्दा नै बनिसकेको छ। दलालहरुले सेवाग्राहीहरुलाई अनुमति पत्र निकाल्दिने भनेर राम्रो रकम असुलि गर्ने गरेको पाइएको छ। यसले दलालहरुलाई ठगी गर्ने वातावरण त सृजना गरेको नै छ र साथसाथै अनुमति पत्रको आधारलाई नै फितलो बनाएको छ। कतिले ट्रायल पास नै नगरी अनुमति पत्र प्राप्त गरेका छन् भने कतिको पैसा खाएर दलाल भागेको उदाहरण पनि छन्। यसरी यातायात कार्यालय को प्राङ्गणमा छिर्ना साथ दलालहरुले तानातान गरेर दुःख दिने गरेको धेरैजनाको गुनासो छ।
कर्मचारीले सेवाग्राही प्रति गर्ने ब्यवहार र बोल्ने तरिका पनि निकै नराम्रो हुने गरेको देखिन्छ। “सरकारी कर्मचारीहरु हामिले तिरेको करबाट नै तलब बुझ्छन्। उनिहरु आम जनताको सेवक हुन्। तर त्यहाँ गएर केहि सेवा लिनु पर्यो वा केही जिज्ञासा राख्यो भने कर्मचारीले वास्ता नै गर्दैनन्। दोहोर्याएर सोध्दा झर्किन्छन्। सेवाग्राहीलाई सुविधा प्रदान गर्नु भन्दा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने प्रवृत्ति बढि देखिन्छ”। अर्का सेवाग्राही मन्जेस गौतम बताउँछन्।
यस्तै गुनासो सन्देश बस्यालको पनि छ। “लाइसेन्स निकाल्दाको लफडा सम्झिँदा कहिल्यै यो ठाउँ आउँदिन जस्तो लाग्या थियो। त्यति बेला बिहान ४ बजे देखि लाइनमा बसेर टोकन लिनु पर्थ्यो।राती आएर लाइनमा बसें। धेरै पटक सोधपुछ गर्दापनि एकछिनमा खुल्छ भनेर भनिराख्नु भाथ्यो। १०:३० तिर मात्र सर्भर बिग्रेको र आज काम नहुने भनेर भनियो। भोलिपल्ट पनि त्यस्तै भयो। पर्सिपल्ट मात्र फर्म बुझाउन मिल्यो। अहिले अनलाइनमा गइसकेपछि यो समस्या नहुने भयो। सजिलो प्रकृया होला सोचेको त, आम नागरिकले पाउने दुःख के घट्थ्यो। लाइसेन्स नविकरण गर्न आएको, यत्रो लाइन छ। व्यवस्थित कहिले हुन्छ कुन्नी। अझ मेरो साथीको त स्कुटरको ट्रायल दिएको थियो। लाइसेन्स आउनु अगाडी जुन चिट दिइन्छ, त्यसमा ट्रकमा पनि टिक लाइएको थियो” उनले बताए।
अर्का लाइसेन्स नविकरण गर्न आएकी सेवाग्राही गीता पौडेल आफ्नो अनुभव सुनाउँछिन्, “स्कुटरको ट्रायल दिन आएको थिए। ट्रायल दिँदै गर्दा बिचमा स्कुटरको स्टार्ट आफै बन्द भयो। ट्रायलको लागि उपलब्ध गराइएको स्कुटर निकै जीर्ण अवस्थामा थियो। यस्तो आफ्नो हातमा नभएको कुराले गर्दा पुनः प्रकृया दोहोर्याउनु पर्यो।“
यस्ता लापरवाही र झमेलाले भुमिगत अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन्छन् र बिचौलियालाई प्रोत्साहन गर्छन। यति मात्र नभएर यातायात कर्मचारीको मिलीभगतमा अवस्था नै यस्तो सृजना गरिन्छ कि सेवाग्राहीहरुले बिचौलियालाई पैसा दिएर काम गराउनु पर्ने अवस्था छ।सिन्धुपाल्चोकबाट अनुमति पत्र बनाउन आएका पेङ्बा लामा भन्छन्, “म लाइसेन्स बनाउन यता आउँदा कति दिन लाग्छ नै थाहा हुन्न। फेरी जागिरबाट कति बिदा लिनु। त्यासको सट्टा दलाललाई पैसा दियो, काम तुरुन्तै हुन्छ”।यसको जिम्मेवार को? सरकारले यस्ता कार्यहरुलाई सुसङ्गठित बनाएर लग्ने हो भने सरकारको आम्दानीमा पनि राम्रो वृद्दि हुने निश्चित छ। यति मात्र नभएर कार्य छिटो र सहज ढङ्गले समापन पनि हुन्छ। यसका लागि कस्ता कदम लिनु ठिक होला त?
छिमेकी देश भारतलाई हेर्ने हो भने लाइसेन्सको प्रकृया नेपालको भन्दा निकै सहज छ। स्थायी अनुमति पत्र प्राप्त गर्नु अगाडी सिकारु अनुमति पत्र पाउने व्यावस्था रहेको छ। सिकारू अनुमति पत्र प्राप्त सहजै गर्न साकिन्छ। यो अनुमति पत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले “L” लेखेर सवारी चलाउन सक्छन्। राजमार्गमा चलाउन भने स्थायी अनुमति प्राप्त व्यक्ति साइडमा राखेर चलाउन मिल्छ। सिकारु अनुमति पत्र प्राप्त गरेको ३० दिन पछि र १८० दिन अगाडी स्थायी अनुमति पत्रको लागि आवेदन दिन मिल्छ।त्यसपछि क्षत्रीय यातायात कार्यालय का कर्मचारीसँग रहेर परिक्षा दिनु पर्छ।अनुमति पत्र दिने कि नदिने भनेर सोहि कर्मचारीले मुल्याङ्कन गर्छन्। यातायात पनि आफ्नै प्रयोग गर्न मिल्छ।परिक्षा पास गरिसकेपछि बायोमेट्रिक्स रेकर्ड गरिन्छ र आवश्यक फोटो लिइन्छ। पास भएकाहरुलाई अनुमति पत्र उनीहरुको ठेगानामै डेलिभर गरिन्छ वा सेवाग्राहीले चाहे कार्यालय बाटै लिन सक्छन।आवेदन दिने र शुल्क बुझाउने प्रकृया पनि अनलाइन कै माध्यमबाट सम्पन्न हुने हुनाले कोही पनि सेवाग्राही कार्यालय मा बसेर झमेला भोग्नु पर्दैन।
तसर्थ नेपालमा पनि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार भएर यस प्रकारको व्यवस्था बसालेर जनतालाई सुबिधा दिन सक्दा यातायातको समग्र क्षेत्र नै व्यवस्थित भएर जान्छ र सरकारको राजस्व वृद्दि हुने देखि नियमन सुदृढ हुन जान्छ।
Previous: उपल्लो मुस्ताङमा सञ्चार सहज
Next: बागलुङका पर्यटकीयस्थलमा चहलपहल बढ्दै